Zvese Zvigadzirwa - Changchun Realpoo Photoelectric Co., Ltd.
M14x0.5 mm yakashongedzwa dzimba, Imwe girazi lens dhizaini. Magadzirirwo: Lens Chinyorwa: Chinhu chimwe chete. Coated Manyiminya girazi Lens Holder: 14mm x 0.5mm tambo, 8mm kureba, ndarira EFL (Inoshanda Focal Kureba): 15.18mm CA (Bvisa Aperture): 9.5 / 9.0mm NA (Numeri Aperture): 0.3 Bemhapemha: 639 ± 20nm
M9x0.5 mm yakashongedzwa dzimba, Maviri magirazi lens dhizaini. Magadzirirwo: Lens Chinyorwa: Zvinhu zviviri; Coated Manyiminya girazi Lens Holder: 9mm x 0.5mm tambo, 10mm kureba, ndarira EFL (Inobudirira Focal Kureba): 9.8mm CA (Bvisa Aperture): 5mm SD (Diode kune lens): 6.5mm NA (Numeri Aperture): 0.3 Bemhapemha:...
M9x0.5 mm yakashongedzwa dzimba, Maviri magirazi lens dhizaini. Magadzirirwo: Lens Chinyorwa: Zvinhu zviviri; Coated Manyiminya girazi Lens Holder: 9mm x 0.5mm tambo, 8mm kureba, ndarira EFL (Inoshanda Focal Kureba): 6.5mm CA (Bvisa Aperture): 5mm SD (Diode kune lens): 2.5mm NA (Numeri Aperture): 0.45 Bemhapemha:...